सौर प्यानलहरूमा रिपेलरहरू मलहरू: समीक्षाहरू (फोटोहरू)
उपनगरीय क्षेत्रमा बसोबास गर्ने Moles, महत्त्वपूर्ण हानि हुन सक्छ र मालिकहरूलाई धेरै समस्याहरू प्रदान गर्न सक्छ। निस्सन्देह, यी जनावरहरू खेती गरिएका पौधहरु को भूमिगत भागहरु खाँदैनन्। तथापि, धेरै छेद बनाउन, तिनीहरू जराहरूलाई गम्भीर रूपमा हान्छ, जो अनिवार्य रूपमा फसल घाटाको रूपमा जान्छ। यसैले, मालिकहरूले यी अनंतप्रकाश अतिथिहरूबाट साइटबाट मुक्त गर्न तत्काल उपायहरू लिनुपर्छ। प्रायः, यो आधुनिक उपकरणहरू जस्तै सौर ब्याटरहरूमा अणु स्केलरहरू लागू हुन्छ । यस प्रकारको यन्त्रहरूको बारेमा समीक्षाहरू एकदम भिन्न हो। तथापि, उनीहरूको प्रभावकारिता उपनगरीय इलाकाका मालिकहरू द्वारा उल्लेख गरिएको छ।
जीवन शैली तिल
यी जनावरहरू जीवित छन् र तदनुसार, माथिल्लो उपजाऊ मिट्टी तहमा बिर्को (20 सेन्टीमिटर भन्दा गहिरो छैन)। तिनीहरूको पाठ्यक्रम सामान्यतया अत्यधिक शंकु हुन्छ, र त्यसैले जाल मा एक तिल पकडाउन गाह्रो छ। यी जनावरहरू वसन्तमा पुनरुत्थान गर्छन्। नारी नर्सहरू मात्र सन्तानको लगभग एक-एक महिनामा। यसपछि, युवा moles वयस्क जीवन सुरु हुन्छ, सामान्यतया आमाबाबुको "सम्पत्ति" को नजिकै। यसैले छोटो समयमा यी साना जनावरहरूले मात्र देशको साइट भर्न सक्छन्।
Moles को शारीरिक विशेषता न केवल अंधापन हो, तर अल्ट्रासाउन्ड को संवेदनशीलता पनि। तपाईलाई थाहा छ, उनको व्यक्ति सुन्न सक्दैन। एक तिल को लागि, त्यो एक धेरै अप्रिय, डरलाग्दो घटना हो। यो पशुहरूको यस विशेष भौतिक विज्ञानमा छ कि आधुनिक अल्ट्रासोनिक स्किर्सको काममा आधारित छ।
के यो प्रयोगको लायक छ?
सौर बैटरहरूमा ध्रुवको स्वरहरू कसरी प्रभावी छन् ? यसको बारे समीक्षाहरू प्रायः राम्रो छन्, किनभने तिनीहरूको प्रयोग वास्तवमा कष्टप्रद डिगगर्सबाट छुटकारा पाउने सबै भन्दा राम्रो तरिकाहरू मध्ये एक मानिन्छ। मolesको निकासीको लागि, सिद्धान्तमा, विभिन्न तरिकामा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यद्यपि, यदि तपाईं ग्रीष्मका निवासीहरूको फोरममा प्रयोगकर्ता सन्देशहरू पढ्नुहुन्छ भने तीमध्ये अधिकांश व्यावहारिक परिणाम नगर्ने। अपमानजनक गंधहरू, वा रित्तोहरूको प्रयोगको साथमा मलहरू सामान्यतया असम्भव हुन्छन्। तिनीहरूबाट मुक्त हुन सबैभन्दा प्रभावकारी तरिका अधिकांश गर्मीका निवासीहरू जाल मान्छन्। तथापि, यस प्रविधि धेरै समय-उपभोग र समय-उपभोग गर्दैछ। एक तिल को पकड, पहिले नै उल्लेख को रूप मा, धेरै मुश्किल छ।
यसैले, धेरै गर्मीको निवासीहरू र अल्ट्रासाउन्डका साथ स्नर्सहरू खरीद गर्छन्, बिना ती प्रयासहरू र चाँडै यी पशुहरूलाई हटाउन आशा गर्छन्। धेरै अवस्थामा, यस्तो उपकरण धेरै प्रभावकारी छ। तर, गर्मीको निवासीहरूको समीक्षा गरेर निर्णय गरेर, दुर्भाग्यवश पनि सधैं। यस्तो यन्त्रहरूको प्रयोगको प्रभावकारिता मुख्यतया माटो र सही स्थापनामा निर्भर गर्दछ। साथै, यस प्रकारको दोहोरिने बेला खरीद गर्दा, कटेज क्षेत्रमा धेरै मालिकहरू निर्माताको ब्रान्डमा ध्यान दिन सल्लाह दिएका छन्।
डिभाइसहरूको डिजाइनको बारे समीक्षाहरू
प्रयोगको सुविधा के हो, गर्मीको निवासीहरूको बहुमतको रायमा, सौर ब्याटरहरुमा एक तिल पुनर्विक्रेता भेद गर्दछ । यस्तो उपकरणहरूको बारे समीक्षाहरू सकारात्मक छन्, ergonomic डिजाइनको लागि सहित। बाहिर आउदा यस्तो जाल लामो लामो स्वादको साथ ठूलो मशरूम जस्तो देखिन्छ। उत्तरार्द्ध तल टाढा छ त्यसैले यो जमीनमा बाँध्न सजिलो छ। "टोपी" मा सौर ब्याट्रीमा घुमाइएको छ । बगैचाका राम्रो समीक्षाहरू यस्तो तिल scarecrows योग्य छन्, अन्य चीजहरू बीच, यस विशेष तत्वको उपस्थितिको लागि धन्यवाद।
ब्याट्रीबाट पुरानो नमूनाको यस उद्देश्यको यन्त्रहरू। पछि प्रायः एकदम लामो अवधिको लागि डिजाइन गरिएको छ (3 देखि6महिना सम्म।), तर तपाईले अझै पनि तिनीहरूलाई बदल्न पैसा र समय बिताउनु पर्छ। सौर ब्याट्री, सामान्यतया एकचोटि, हामीलाई स्कार्फको अस्तित्व सम्झन अनुमति दिँदैन। र दुवै गर्मीमा र सर्दमा। अल्ट्रासोनिक रिपेलरको शरीर सामान्यतया एक टिकाऊ, नमी प्रतिरोधी प्लास्टिक हो जसले गम्भीर तापक्रम परिवर्तन गर्न सकेन।
सौर प्यानलहरूमा तिल पुनर्विक्रेता जस्ता यन्त्रहरूको स्थापना या त जटिल छैन। यन्त्रहरूको प्रयोगको लागि निर्देशन अत्यन्त सरल छ। उपकरण अनपैक गरिएको छ र "बोनेट" लाई यसको "पैर" मा खराब। यसबाहेक, पुन: रिलाभर सही स्थानमा मैदानमा फसेको छ।
यस प्रकारका यन्त्रहरूको बारेमा राम्रो विचार मुख्यतः ती गर्मीका निवासी निवासीहरू बीचको गठन भएको थियो, जसमा भू-भागहरू प्रायः ढिलो हुन्छन्। घने माटो संग आवंटन को स्वामी प्रायः यस तथ्य को ध्यान दिनुहोस कि अल्ट्रासोनिक रिपेलरले moles मा कुनै प्रभाव उत्पन्न गर्दैन। यो कारण उपकरणको धेरै सिद्धान्त हो। क्रोववले अल्ट्रासाउन्ड असमानतालाई डराउँछन्। यद्यपि, मानिसको द्वारा सुनेको सामान्य आवाजको विपरीत, त्यो घनी मिट्टी मार्फत घुमाउने असुविधा हो।
यसैले, यो सौर ब्याटरहरुमा अल्ट्रासोनिक तिल स्केलरहरू (पृष्ठमा उपलब्ध छन् फोटोहरू) मात्र ढिलो मैदानमा खरिद गर्न लायक छन्। मिट्टी को मिट्टी को लागि, यस्तो उपकरणहरु लाई राम्रो तरिकाले फिट छैन। यद्यपि, उनीहरूले यो अवस्थामा काम गर्न सक्छन्। भारी माटो (र फेफड़ोंमा पनि), यो सिफारिस गरिन्छ कि तिनीहरू सीधा अणुमा फँसिए। अल्ट्रासाउन्डको प्रकृया धेरै राम्रा हुन्छ।
केही गर्मीको निवासीले ध्यान दिन्छन् कि रूसको बीचको क्षेत्रको लागि, यस्ता यन्त्रहरू उपयुक्त छैनन्। बेरोजगार, तिनीहरूलाई रिचार्ज गर्न पर्याप्त प्रकाश छैन। यद्यपि, धेरै साइट मालिकहरू, यसको विपरीत, विश्वास छ कि हाम्रो देशमा यस्तो रिसेलरको लागि पर्याप्त धूप दिनहरू छन्। यस अवस्थामा, सबै कुरा उपकरणको ब्याट्रीको डिजाइन र गुणस्तरमा निर्भर गर्दछ।
सौर प्यानलहरूमा एक तिल पुनर्विक्रेता जस्ता यन्त्र खरीद गर्दा, निर्मातालाई ध्यान दिन आवश्यक छ। घनिष्ठ कम्पनीहरू, विशेष गरी चीनमा उत्पादन गर्ने उपकरणहरू खरीद नगर्नुहोस्। उत्तम आज युरोप र रूस मा रिसेप्टर रिलीज हो। केही यन्त्रहरूको केहि प्रसिद्ध ब्रान्डहरूमा कस्तो प्रकारका समीक्षाहरू उपलब्ध छन् बारेमा, र हामी थप कुरा गर्नेछौं।
मोडेलहरूको बारेमा बगैचाहरूको "सौर"
धेरै गर्मीको निवासीहरूको अनुसार, यो ब्रान्डमा सौर बैटरीमा धेरै प्रभावकारी moles स्काउट्स उत्पादन गरिन्छ। "सौर" मोडेलहरूको समीक्षाहरू सबै भन्दा राम्रो छन् किनकि तिनीहरूका स्थापना पछि जनावरहरू वास्तवमा एक महिना र आधा भित्र जान्छ। यस ब्रान्डको गुणस्तरका लागि, धेरै गर्मीको निवासीले एलईडी लाइट बल्बको पारदर्शी प्लास्टिक पछि, "पैदल" भित्र "टोपी" अन्तर्गत उपस्थिति समावेश गर्दछ। रातको वरिपरि बाहिर जाँदै, "मशरूम" मा ठोक्किएको यो असम्भव छ कि जमीनमा ठुलो ठुलो। यहाँ सौर प्यानलहरू उच्च गुणस्तरका छन्। उनीहरूको पुनर्जन्मको साथ कुनै पनि समस्याहरू, गर्मीको निवासीहरूको समिक्षाको समीक्षा गरेर, उठ्दैन। एक दिन सूर्य पछि, "सौर" ले लगातार तीनवटा ओभरटेस्ट दिनका समस्याहरू बिना काम गर्न सक्दछ।
सौर माथको लागि सौर मल पुनर्विक्रेताको कमी सौर, गर्मीको निवासी अनुसार, एक मात्र छ। यो यसको उच्च लागत हो। एक पुनर्विक्रेताको लागि मात्र तपाईंले 3200- 3300 रूबलहरू तिर्नुपर्छ। दस हेक्टेयरमा एक साइटमा तपाइँले 3-4 यस्तो "फंगुस" चाहिन्छ, किनकि यी मोडेलहरूको कार्य (650 एम2) कुनै अन्य अल्ट्रासोनिक जस्तो सीमित छ।
"Thunder-Profi LED" यन्त्रहरूको बारेमा समीक्षाहरू
यो अर्को ब्रान्ड हो जसले रूसी गर्मीको निवासीहरूको मान्यता प्राप्त गरेको छ। सौर बैटरीमा तिल पुनर्विक्रेताको कार्य क्षेत्र "थन्डर-प्रोईइड एलईडी" "सौर" - 700 एम2भन्दा ठूलो छ। यसको योग्यताको लागि, गर्मीको निवासीहरू काममा दक्षता मात्र होइन, तर एक राम्रो निर्माण गुण पनि समावेश गर्दछ। यो यन्त्र भित्र रबड गोस्केटहरूको उपस्थितिको कारणले कोहरेको समयमा नाप्ने पानी वा भाप सक्दैन। यस मोडमा एलईडी ब्याकलाइटिंग पनि उपस्थित छ। यो उपकरणको "थन्डर-प्रोफाई" लायक छ "सौर" भन्दा कम सस्ता - लगभग 3000 rubles।
रूसी मोडेल को एक्कोनिनर SM-153: प्रतिक्रिया
उपनगरीय क्षेत्रहरूको घरेलू मालिकहरूको अनुसार, यो मोडेल लनका लागि एकदम सही छ। निस्सन्देह, धेरै भान्साको बगैंचामा त्यस्ता स्वादहरू स्थापना गर्नुहोस्। केही गर्मीका निवासीहरू "केही समयका लागि" एक्कैसिनिपर "प्रयोग गर्छन् (3-4 वर्ष) र परिणामबाट सन्तुष्ट हुन्छन्। यो ब्रान्डका यन्त्रहरू केवल 1500 रूबलहरू छन्।
तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ, राम्रो तिल सौर बैटरी मा डराउँछन बेकार थिएन। अधिकतर अवस्थामा, उनीहरूले आफ्नो कार्यको साथमा परेका राम्रो हुन्छन्। यो विशेष गरी हल्का मिट्टीको साथको लागि सही हो। तर, निस्सन्देह, एक ग्यारेन्टी परिणाम केवल उपकरण प्रयोग गरेर प्राप्त गर्न सकिन्छ जुन प्रख्यात निर्माताबाट धेरै सस्तो छैन।
पैराटिन बॉइलर: प्रविधि र सहमति। नक्कली बॉइलर र उनको जडानको प्रकार
गरम पानी कुनै चीज हो जुन बिना आधुनिक जीवन छैन
विद्युतीय ट्रिमरको दर्जा। घाँस ट्रिमर
विवरण र फोटो: हतियार र झण्डा को Karelia कोट
पोटासियम chromate। रासायनिक र शारीरिक गुण को तयारी। आवेदन
कसरी भर्न परिवहन नक्शा: लोकप्रिय विधिहरू
को Viburnum को वाइन। नुस्खा, सल्लाह, टेस्टिङ!
उम्दा ABCs: घरमा निगालो पकाउन कसरी
ताप भटमास मासु उसिनेर
मेरो प्रयोगकर्ता नाम कसरी परिवर्तन गर्ने?
सर आर्थर कनन डयल: लेखक "Sherlock होम्स" र मात्र
क्रोएशिया को जनसंख्या। धर्म, भाषा र देश को एक संक्षिप्त विवरण
अनुहार मा मुँहासे देखि गोलियां। मुँहासे र मुँहासे को लागि गोलियां: समीक्षाहरु
अन्तिम टर्मिनल चरण कति लामो हुन्छ?